Zimgreats - News, sport and gossip about Zimbabweans.
Zimgreats - 26 years into Zimbabwe's independence, the promised land of milk and honey lie in ruins. On the surface, Zimbabweans are at their weakest but again, look closer, there are great sons and daughters in and out of Zimbabwe who have risen above this. And this site brings you news about day to day life in Zimbabwe and also Zimbabwes most celebrated sons of the soil.
Zimbabwe, Mugabe, Victoria Falls, Harare, News, Africa, Southern Africa, Rhodesia, Gold
A Zimbabwean news service and aggregator that indexes news items, reports and headlines with special emphasis on political and business news.